बालकले खेलौना सम्झेर ट्रिगर दबाउँदा उनका २६ वर्षीय पिताको गाेली लागि मृत्यु
एजेन्सी । फ्लोरिडाको ओर्लेण्डो नजिकको एक घरमा दुई वर्षका बालकले गोली भरिएको बन्दुक खेलाउँदा उनका २६ वर्षीय पिताको मृत्यु भएको छ ।
युक्रेनी लडाकुहरूद्वारा रुसलाई ठूलो झट्का !
एजेन्सी । रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धको सय दिन बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै परिणाम आएको छैन । एकातिर रुसले युक्रेनमा विनाश मच्चाइरहेको छ भने युक्रेनी लडाकुहरू पनि रुसी सेनाहरुलाई क्षति पुर्याइरहेका छन् ।
म्यानमारमा ३४ वर्षपछि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो, पूर्व सांसदसहित दुई जनालाई मृत्युदण्डको फैसला
एजेन्सी । म्यानमारमा ३४ वर्षपछि फेरि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । यसअघिको आङ सुकी सरकारका एक सांसद र एक कार्यकर्तालाई यो सजाय सुनाइएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट भएपछि परिवार पाल्न युवतीहरू देह व्यापारको बाटोमा !
एजेन्सी । श्रीलंका स्वतन्त्र भएपछि सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। मुद्रास्फीति रेकर्ड स्तरमा छ र जनताले जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक वस्तुसमेत पाउन सकेका छैनन्।
उत्तर कोरियाद्वारा बलिस्टिक मिसाइल परीक्षण
एजेन्सी । उत्तर कोरियाले आफ्नो पूर्वी तटमा एउटा ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ । दक्षिण कोरियाली सेनाले आइतबार यो जानकारी दिएको हो ।
यो देशमा धेरै वर्षपछि पुनः सुरु गरिँदै मृत्युदण्डको सजाय, पूर्व सांसदसहित ४ जनालाई फाँसी दिइने
एजेन्सी । म्यानमारमा मृत्युदण्डको सजाय पुनः लागू हुने भएको छ । यो देशमा अन्तिम पटक सन् १९८८ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
फ्रान्समा मन्कीपक्स तीव्र रूपमा फैलिदै, ५१ जना संक्रमित, म्याक्रोन सरकारद्वारा भ्याक्सिन लगाउन अपिल
एजेन्सी । फ्रान्समा मन्कीपक्सका केसहरू लगातार बढिरहेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ। यो रोगले अहिले कोरोना भाइरसजस्तै मानिसलाई डराएको छ ।
चीनले मिडियालाई दियो चेतावनी, भन्योः लकडाउन शब्दको प्रयोगमा प्रतिबन्ध
एजेन्सी । चीनका घटनाहरू कभर गर्ने वेबसाइट चाइनिज डिजिटल टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ सरकारका अधिकारीहरूले मिडियालाई लकडाउन शब्द प्रयोग गर्नबाट रोकेका छन्।
टर्कीले आफ्नो नाम बदलेर टर्किए राख्यो, कारण यस्तो !
एजेसी । टर्कीको नाम अहिले टर्किए हो। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानको सरकारले डिसेम्बरमा यसका लागि प्रयास सुरु गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्गठन (यूएन) का महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले बुधबार भनेका छन्,‘टर्कीका विदेशमन्त्री मेभलुत काभुसोग्लुले अब आफ्नो देशलाई टर्की नभई टर्कीए भनेर चिन्नु पर्ने पत्र लेख्नुभएको छ। हामीले यो अनुरोध स्वीकार गरेका छौँ।’
रुस–युक्रेन युद्धको १०० दिनः ६८ लाख युक्रेनी नागरिकहरूले घर छोडे
एजेन्सी । रुस र युक्रेनबीचको युद्ध भएको १०० दिन बितिसकेको छ । यसबीच विश्व अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा व्यापक परिवर्तन देखियो । एक समयको सुन्दर युक्रेनी शहरहरू ध्वस्त भएका छन् र भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्।